Beneficence bụ banyere nghọta ma rụọ ọrụ n'ihe ize ndụ / uru profaịlụ gị ọmụmụ, wee na-ekpebi ma ọ bụrụ na ọ na-abia ihe ókè.
The Belmont Report rụrụ ụka na ụkpụrụ nke Beneficence bụ ibu ọrụ na-eme nnyocha na-sonyere, nakwa na ọ na-agụnye abụọ n'akụkụ: (1) adịghị emerụ na (2) jirichaa na o kwere omume uru na iwelata ekwe omume Harms. The Belmont Report kọrọ echiche nke "adịghị emerụ" ka Hippocratic omenala na ọgwụ ụkpụrụ ọma, na ọ ga-egosi n'ụzọ dị a siri ike n'ụdị ebe ndị nnyocha ahụ "agaghị emerụ otu onye n'agbanyeghị uru nke nwere ike bịa ka ndị ọzọ" (Belmont Report 1979) . Otú ọ dị, Belmont Report na-ekweta na a na-amụta ihe bara uru nwere ike ịgụnye n'inwe ụfọdụ ndị na-ize ndụ. Ya mere, oké mkpa nke na-eme ọ dịghị nsogbu nwere ike ịbụ kenyere n'ime oké mkpa ịmụta, na-eduga na-eme nnyocha iji mee ka ụfọdụ ike ikpebi banyere "mgbe ọ bụ justifiable ichọ ụfọdụ uru n'agbanyeghị ihe ize ndụ, na mgbe uru ga-foregone n'ihi na nke ize ndụ. " (Belmont Report 1979)
Na omume, ụkpụrụ nke Beneficence e kọrọ isi nrọ ahụ pụtara na-eme nnyocha kwesịrị ibido abụọ dị iche iche Filiks: a n'ihe ize ndụ / uru analysis na mgbe a mkpebi banyere ma ize ndụ na abamuru tie kwesịrị ekwesị usoro ziri ezi itule. Nke a mbụ usoro bụ n'ụzọ dị ukwuu a oru okwu a na substantive nka, na nke abụọ bụ n'ụzọ dị ukwuu ihe usoro ziri ezi n'agbanyeghị ebe substantive nka pụrụ ịdị ala bara uru ma ọ bụ ọbụna detrimental.
A ize ndụ / uru analysis na-agụnye ma nghọta ma rụọ ọrụ ize ndụ na abamuru nke a na-amụ. Analysis of ize ndụ kwesịrị ịgụnye ihe abụọ: gbasara nke puru omume oghom ihe na ịdị njọ nke omume ndị ahụ. N'oge a na ogbo, n'ihi na ihe atụ, a na-eme nchọpụta pụrụ ịgbanwe ọmụmụ imewe iji belata gbasara nke puru omume dị njọ omume (eg, enyocha si sonyere ndị na-enweghị) ma ọ bụ belata ogo ihe oghom ihe omume ma ọ bụrụ na ya emee (eg, mee ka ndụmọdụ dị na sonyere ndị na-arịọ ya). Ọzọkwa, n'oge usoro a na-eme nnyocha mkpa iburu n'uche mmetụta nke ọrụ ha abụghị naanị na keere òkè, kamakwa na-abụghị sonyere na-elekọta mmadụ na usoro. Dị ka ihe atụ, tụlee nnwale site Restivo na van de Rijt (2012) na mmetụta nke awards on Wikipedia editọ (tụlere n'Isi nke 4). Na ọmịiko, ndị na-eme nnyocha nyere awards na ụfọdụ editọ na ha weere kwesịrị ekwesị na mgbe ahụ na-esoro ha onyinye ka Wikipedia tụnyere a akara ìgwè nke dokwara kwesịrị editọ onye na-eme nnyocha na-enyeghị ihe award. Na nke a karịsịa ọmụmụ, ọnụ ọgụgụ nke awards ha nyere bụ obere, ma ọ bụrụ na-eme nnyocha juru Wikipedia na awards ya nwere ike ghara ịdị na obodo nke editọ na-enweghị ndibiat ọ bụla n'ime ha n'otu n'otu. Yabụ, mgbe na-eme n'ihe ize ndụ / uru analysis ị kwesịrị ị na-eche banyere mmetụta nke ọrụ gị bụghị naanị on sonyere ma na ụwa ọzọ Ndị.
Ọzọ, mgbe ihe ize ndụ na e ebelata na uru maximized, na-eme nnyocha ga-amata ma na-amụ ihe na-abia a mma itule. Ethicists adịghị ike ikwu a dị mfe nkwubi nke akwụ ụgwọ na uru. Karịsịa, ụfọdụ ize ndụ ijere research impermissible n'agbanyeghị uru (eg, ndị Tuskegee Syphilis Study kọwara na Historical Odide Ntụkwasị). N'adịghị ka ihe ize ndụ / uru analysis, nke bụ n'ụzọ dị ukwuu oru, nzọụkwụ nke abụọ a bụ nke ukwuu usoro ziri ezi na ike n'ezie a ga-enriched site ndị na-adịghị nwere kpọmkwem isiokwu-ebe nka. N'ezie, n'ihi na outsiders mgbe achọpụta dị iche iche ihe si insiders, IRBs na US na-achọrọ nwere dịkarịa ala otu na-abụghị na-eme nchọpụta. Na m ahụmahụ na-eje ozi na ihe IRB, ndị a outsiders pụrụ inye aka maka ime ka ìgwè ahụ-na-eche. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ekpebi ma gị oru ngo nyocha na-abia kwesịrị ekwesị n'ihe ize ndụ / uru analysis adịghị nnọọ ịjụ gị ibe, na-agbalị na-arịọ ụfọdụ na-abụghị ndị na-eme nnyocha; ha na-aza ike iju gị anya.
Ime ihe e nke Beneficence ka ihe atụ atọ ahụ pụta ìhè eziokwu na e nwere bụ mgbe ọkpụrụkpụ anya banyere ihe ize ndụ tupu a ọmụmụ amalite. Dị ka ihe atụ, ndị na-eme nnyocha amaghị ihe gbasara nke puru ma ọ bụ ịdị ukwuu nke oghom ihe ndị nwere ike mere site ọmụmụ ha. Nke a na-ejighị n'aka bụ n'ezie ezi ọsọ na dijitalụ afọ nnyocha, na mgbe e mesịrị ke ibuot emi, Aga m etinye niile dị n'otu nkebi ihe ịma aka nke ime mkpebi na ihu nke ejighị ihe n'aka (Nkebi 6.6.4). Otú ọ dị, ụkpụrụ nke Beneficence-eme na-atụ aro mgbanwe ụfọdụ ndị nwere ike ime ka ndị a ọmụmụ ka mma ha n'ihe ize ndụ / uru itule. Dị ka ihe atụ, na mmetụta uche Contagion, ndị na-eme nnyocha pụrụ nwara enyocha si ndị mmadụ n'okpuru 18 afọ na ndị na-nwere ike ịbụ na o yiri ka eme merụsịrị ka ọgwụgwọ. Ha nwere ike na-agbalị iji belata ọnụ ọgụgụ nke ndị keere òkè site na iji oru oma mgbakọ na mwepụ usoro (dị ka a kọwara n'ụzọ zuru ezu n'Isi nke 4). Ọzọkwa, ha gaara nwara nyochaa sonyere na-enye aka onye ọ bụla na pụtara na e imerụ. Na Ire, Ties, na Time, ndị na-eme nnyocha pụrụ ijiwo extra echebe ke ebe mgbe ha wepụtara data (ọ bụ ezie na ha na usoro e mma site Harvard si IRB nke na-egosi na ha bụ ndị agbanwe agbanwe na-emekarị n'oge ahụ); M ga-enye ụfọdụ ọzọ ụfọdụ aro banyere data ntọhapụ mgbe e mesịrị na isi mgbe m na-akọwa informational ize ndụ (Nkebi 6.6.2). N'ikpeazụ, na encore, ndị na-eme nnyocha pụrụ nwara iji belata ọnụ ọgụgụ nke ize ndụ na-arịọ na-kere iji nweta mmesho ihe mgbaru ọsọ nke oru ngo, na ha gaara ekwe sonyere ndị kasị nọrọ n'ihe ize ndụ site repressive ọchịchị. Onye ọ bụla n'ime ndị a ekwe omume mgbanwe ga-ewebata ahia-offs n'ime imewe ihe ndị a ngo, ma na ihe mgbaru ọsọ m adịghị egosi na ndị a na-eme nnyocha gaara mgbanwe ndị a. Kama nke ahụ, ihe mgbaru ọsọ m bụ iji gosi ụdị mgbanwe na ụkpụrụ nke Beneficence nwere ike na-atụ aro.
N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na dijitalụ afọ ka n'ozuzu mere erikpu nke ize ndụ na abamuru ihe mgbagwoju, ọ na-mere ka ọ kara eme nnyocha dịkwuo uru nke ọrụ ha. Karịsịa, ngwaọrụ nke dijitalụ afọ nke ukwuu ikwado oghe na reproducible research, ebe na-eme nnyocha mee ka ha research data na koodu dị ka ndị ọzọ na-eme nnyocha na-eme ka ha akwụkwọ dị ka ọha na eze site n'ibipụta na-emeghe ohere. Mgbanwe a na-emeghe na reproducible nnyocha, mgbe ọlị dị mfe, na-enye a ụzọ na-eme nnyocha dịkwuo uru nke ha research enweghị n'inwe sonyere ọzọ ọ bụla n'ihe ize ndụ (nkekọrịta data isịneke a ga-atụle zuru ezu na ngalaba na informational n'ihe ize ndụ (Nkebi 6.6.2)).